Ndenye Guide: Ejegharị Site Train Site Paris Iji Nice | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Ndenye Guide: Ejegharị Site Train Site Paris Iji Nice
A na-ejikọ ụgbọ oloko Paris na Nice site na usoro ụgbọ oloko na-agba ọsọ ma dị oke ọnụ, yabụ na ịga na ógbè abụọ ahụ ozugbo enweghị bmfe. Abụọ ndị a iche na mpaghara na-adọta ọtụtụ puku ndị nleta n'afọ ọ bụla. Nice ugha obi nke pụtara French Riviera na Ndida nke France. Paris bụ isi obodo na kasị obodo nke France, nsogbu na osimiri Seine, ke edere edere France. Ọ bụ ike ịhọrọ n'etiti ihunanya obodo nke Paris na ala gbara osimiri okirikiri mma nke Nice, ma na ụgbọ okporo ígwè njem, ị na-adịghị ka. Iji jide n'aka na ị nwere ihe ndị kasị akpali akpali njem, anyị nwere a ole na ole Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè si Paris na Nice.
Họrọ inzọ Ziri Ezi Maka Njem Gị
n'ozuzu, niile ụgbọ oloko na France na-na oge, ọma na ezi uche dị ọnụ. Ejegharị ejegharị si Paris na Nice ị nwere ike ịga na na a ngwa ngwa ọsọ ụgbọ okporo dị ka TGV ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ, i nwere ike iji nwayọọ na mpaghara ụgbọ oloko, na ohere ịhụ ụfọdụ fabulous ejikọta obodo. I nwekwara ike na- -eji ụgbọ okporo. The TGV ụgbọ okporo agbaba n'etiti 8 ka 10 ugboro ugboro kwa ụbọchị site na Paris Gare du Nord ruo tashar Nice Ville. Traingbọ oloko a ga-erute Nice n’ihe dị ka awa ise. Njikọ ụgbọ ala kachasị ọsọ ga-esi gị Paris gaa Nice n'ime awa iri na abụọ.
Tụlee nkwụsị na obodo ndị dị n'ụzọ aga Nice
You nwere ike iji ụgbọ oloko si na Paris gaa Nice n'ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ kwụsịtụ n'obodo ndị mara mma Marseilles na Lyon kama. The oke bụ gị! ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ mapụtara oge, atụle-eleta otu, ma ọ bụ ọbụna abụọ, ndị a mara mma French obodo na ụzọ gị Nice si Paris. Marseilles bụ a ala gbara osimiri okirikiri obodo na mba ofesi vibe na awade kasị mara mma. The train station has igbe akpa ka nkwụsị anya ebe a maka a awa ole na ole nwere ike ịbụ ihe ọzọ ga-adaba adaba.
Ị ga-agabiga Lyon na ụzọ gị Nice. Nke a eme ihe iche iche na edgy obodo bụ maa kwesịrị ịgagharị. Obodo a bụ ọzọ ehiwe na France maka na nkà na akụkọ ihe mere eme na a na-ghọtara maka ụwa-klas nri.
n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Paris bụ nnukwu na pụrụ ịbụ nnọọ mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ị bụghị n'ebe ahu n'iru. Jide n'aka na- na-abata n'oge to find out which platform your train will leave from.
I gha acho oge iji kwado tiketi gi tupu njem gi belụsọ na ị zụtara ya na Save A Train. In case you bought your tickets at the old yellow machines ‘compostage de billets’ that are usually just before you reach the platform. If you have a ticket that you bought with Save A Train, onye nyocha na ụgbọ oloko n’onwe ya ga-emezi ma chọpụta na eticket gị dị mma na ụgbọ oloko ahụ.
Na-eche echiche nke na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè si Paris na Nice? gaa Zọpụta A Train online to check out all our nanị n'ego ụgbọ na-amalite na atụmatụ gị ọzọ njem! There are plenty of discounted fares available throughout different rail networks in France. you can also keep a lookout for the latest discounts by following our Facebook na Twitter peeji nke kwa.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-train-paris-nice%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelfrance njem travelparis traveltips